Dalxiis Warshad - Nanjing Zhitian Mechanical And Electrical Co., Ltd.
Waxaan haynaa koox xirfadlayaal ah oo ku qalabeysan mashiino sax ah oo heer sare ah sida mashiinka caajiska ah ee dhijitaalka ah, mashiinka jajabka ah ee nambar ahaan loo kontaroolo, mashiinka dhagaxa fidsan ee nambarada ah iyo sidoo kale xarun wax soo saar.
1. Degdeg ah oo heer sare ah.
2. Mashiinnada dhijitaalka ah ee leh shaqooyin badan si kor loogu qaado helitaanka qalabka.
3. Ka shaqee madal hore halka barnaamijku ka socdo barxadda dambe.
4.Hubinta adkaanta shaqada sare iyo dusha sare ee dusha sare iyadoo loo soo bandhigayo tiknoolajiyad is xakameyn is-habeyn ah; Dhanka kale, nolosha jarayayaasha iyo soo saarista waxtarka ayaa aad loo hagaajiyay.
5. Burburka is-tijaabinta iyo is-hagaajinta shaqada ayaa loo isticmaalaa.
6. Qaabeynta, jaangoynta iyo lebiska qaabdhismeedka qalabka waa la waafajiyay.
Waxaan leenahay nidaam tijaabo oo qumman oo leh qalab baaris sax ah, iyo koox xirfadlayaal ah oo injineernimo tayo leh oo leh shaqsiyaad waajib saaran oo kaliya kormeer tababaran.
Tilmaamaha dhererka Marl, saxsanaanta waxay noqon kartaa ilaa 0.1μm, taas oo ah 200 jeer oo sax ah tijaabada caadiga ah ee gacanta.
Nidaamka tijaabinta ayaa lagu dabaqi karaa tijaabinta adag ee alaabada laga soo saaray qalab kala duwan, taas oo qaladka tilmaamtu ka yar yahay 6HLD mid togan iyo mid taban, kaas oo qaladka ku celiska ahi ka yar yahay 6HLD.
3.Baadhitaanka Cadaadiska Cadaadiska
Dammaanad qaad cabiraadda nidaamka wareegga biyaha ee foosto.
Tijaabinta wax soo saarka oo dhameystiran, hubi in alaabtu ay tahay eber cillad, eber dhaawac.
5.Garte-khaladka 'Debug Platform'
Waxyaabaha tijaabada ah waxay ku shaqeeyaan kiis la siman yahay.
Qaybta Wareejinta Tex65aii, Caaga Extruder Ku marooji Foosto, Fur Foosto Wixii Extruding, Baarka Loogu Tala Galay Mataanaha Ku Tilmaame, Extruder Double-Ku marooji, WR15E usheeda dhexe,